Baarlamanka Soomaaliya: Maxay tahay sababta la isugu khilaafay xeerkan dembiyada “Galmada”? – Kalfadhi
Xildhibaannada golaha shacabka ee Barlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa is hortaagay in la ansixiyo ajandaha kulankoodii sabtidii dhacay ee ku saabsanaa Akhrinta Koobaad ee sharciga dambiyada galmada la xiriira.
Waxay diidmada sabab uga dhigeen in sharcigan iyo ciwaanka uu wataba aanu u qalmin dadka Soomaalida isla markaana uu lid ku yahay dhaqanka iyo diinta Islaamka.
Sharcigan oo ay soo gudbisay xukuumadda ayaa la doonayay in akhrintiisa koobaad la bilaabo ka dibna laga doodo, balse xildhibaannada ayaa ku tilmaamay mid aan u qalmin in laga hadlo.
Magaca sharciga – Ereyga “galmada”
Dhanka kale, Gudoomiye ku xigeenka Baarlamaanka Cabdiweli Muudeey ayaa dhankiisa sheegay in sharcigan markii xukuumadda ay u gudbisay Golaha Shacabka ay ka dhalatay dood badan.
Xeerkan wuxuu magaca guud ee jaldigiisa kore yahay “Sharciga Dembiyada Galmada la xidhiidha.” Magacii hore ee sharciga wuxuu ahaa “sharciga Jinsiga”, sida laga soo xigtay guddoonka Baarlamaanka.
“Magaca laftiisa, hadda meesha waxaa ku qoran sharciga dambiyada galmada la xiriira awel hore waxaa ku qornaa sharciga jinsiga… waxaana nagala rabaa in sharciga uu ahaado mid waafaqsan shareecada islamaaka marka uu inta ka baxayo,” ayuu yiri Xildhibaan Muudeey.
Garyaqaan Cabdillahi Sheekh Ismaaciil oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay: “Cinwaanka lagu soo bandhigay ee sharciga uu xambaarsanaa waa mid aan bulshada soomaaliyeed u dhadhameyn iyo xildhibaanada… magac faaxisho ah in baarlamaanka la horkeeno iyadu waxay tahay wax aan dadku u cuntameynin.”
Sharcigaan oo markii hore ay golaha wasiirrada u gudbiyeen baarlamaanka, waxaa wax ka badalay guddiga joogtada ee Baarlamaanka oo la gaashaday culimo iyo aqoonyahanno, sida uu sheegay Gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka, Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudeey.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa sharcigan ku tilmaamay mid “ka soo horjeedo dhaqanka iyo diintaba marka la eego sida uu u qoran yahay”.
“Haddaan nahay Golihii Shacabka soomaaliyeed, nooma cuntanto cinwaankan ay ka bilaabaneyso doodda, galmadu wey micno badan tahay wey wajiyo badan tahay,” ayuu yiri xildhibaan Dalxa.
“Ereyga galmada waa in uu meesha ka baxaa”, ayuu hadalka ku sii daray.
Sharciga oo ah mid qabyo qoraal ah, waxyaabaha ku xusan ee doodda kulul dhaliyay waxaa ka mid ah – falal dambiyeedka galmada, Xad gudub galmo, Isku day kufsi, Kufsiga, Kufsi wadareed, Dhiiri Gelin Fal Galmo (Jinsi), Addoonsi Galmo (jinsi), Xadgud Masuul, Dalxiis Galmo, Dhoofin Fal Galmo, Adeegsi Maandooriye, Afduubka Ganacsiga Galmada, Ganacsiga Muuqaalada Galmada, Aqoonsiga Dadka Nugul iyo qodobo kale.
Hay’ado caalami ah, sida Qaramada Midoobeey iyo dad u ololeeya xuquuqda Dadka ayaa walaac ka muujiyay qodobka guurka ka hadlaya ee sharcigan ku xusan.
Qodobkan ayaa dhigaya in in guurka qofka yar uu banaan yahay balse waxaa lagu xiray shuruudda ah in qofkaas lala sugo waqtiga aqal galka.
Sida ku xusan sharciga: “Heshiiska guurka qofka yar shareecada Islaamka waa ku banaan tahay, waxayse qabtaa in wakhtiga aqal galka lala sugo illaa inta qofka yari ka yeelanayo awood uu uga qeyb galo galmada, iyadoo laga feejignaanayo dhibaatada caafimaad ee ku dhici karta,”
“Sidaa derteed lama ogola in loo galmoodo qof aan awood u lahayn galmada, qofkii u galmoodana wuxuu muteysanayaa ciqaabta dhaawac ama Fal xumo oo shareeco ahaan ah ‘Tacsiir iwm ah’,” waa sida ku xusan sharciga qodobkiisa 26-aad.
Waxaa qodobkan ka hadashay Qaramada Midoobay iyo iyo beesha caalamka ee Soomaaliya oo muujiyey walaaca ay ka qabaan.
War-saxaafadeed ka soo baxay Qaramada Midoobeey, qeybta u qaabilsan ahweenka waxaa lagu yiri: “Waa walaac wayn in aan ogaanay in Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya uu wado ka doodidda iyo meelmarinta Sharciga Dembiyada Galmada oo ay soo diyaariyeen golaha Wasiirada iyo Wasaaradda haweenka iyo Xuquuqda dadka iyo ururada u dooda Xuquuqul Insaanka, sannadkii 2019-kii.”
UNFPA ayaa sheegtay in aysan taageereyn sharci kasta oo dhibaato ku ah xuquuqda haweenka iyo gabdhaha kaas oo gelin kara halis dheeraad.
“Sidoo kale ma taageereyno xeer aan waafaqsaneyn dhaqanka iyo heerarka caalamiga ah ee Xuquuqda Aadanaha”, ayaa ku qoran warbixinta Qaramada Midoobeey.
“Dumarka iyo gabdhaha Soomaaliya waxay xaq u leeyihiin in laga difaaco xadgudubyada ku saleysan jinsiyadda iyo dhaqamada dhibaatada dhibaatada leh”.
Barta Twitter-ka ee Xafiismka Qaramada Midoobeey ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu qoray: “UN iyo saaxiibbadeed waxay ka walwalsan yihiin in Gudoomiyaha Baarlamaanka Mursal uu isku deyay gudbinta sharci cusub oo si qoto-dheer u kala daadsan kaas oo ogolaanaya guurka gabdho yaryar kana soo horjeeda xeerarka caalamiga ah”.
“Qaramada Midoobeey waxay Golaha Wasiirada u soo jeedineysaa in ay dib u soo celiyaan sharcigii hore ee Dembiyada Galmada”. BBC ayaa warbixintan markii hore lagu daabacay.